दाजुबहिनी नै मृगौला पी’डित, पैसा नभएर उपचार भएन ! शक्दो शेयर गरि मद्दत गरौँ – Life Nepali
दाजुबहिनी नै मृगौला पी’डित, पैसा नभएर उपचार भएन ! शक्दो शेयर गरि मद्दत गरौँ
दैलेखको नौमूले गाउँपालिका–१ तोलीका एकै घरका दाजु र बहिनी मृगौला पी’डित भएका छन्। ३६ वर्षीय दाजु दत्तप्रसाद ढकाल र २१ वर्षीया बहिनी नविना ढकालका दुवै मृगौला पी’डित बनेका हुन्। दुवै दाजु बहिनीको मृगौला पी’डित भएपछि आर्थिक अ’भावमा उपचार हुन सकेको छैन्। नौमुले गाउँपालीका–१ मा रहेको नेपाल आधारभुत बिद्यालय अवलतोलीका शिक्षक रहेका दत्तप्रसाद ढकालले दुई बर्ष अघि दवबै मृगौला फे’ल भएपछि भत्तपुरमा रहेको मानव अंग प्र’त्यारोपण गरेका थिए। उनलाई धर्मपत्नी सिता शर्मा अधिकारीले मृगौला दिएकी थिइन।
Previous मन्त्रीले गरे जुत्ता पसलको उद्घाटन !
Next टिपर चालकले खाए शपथ